Trade ကုန်သွယ်ရန်သင်ယူပါ အခမဲ့ Forex Signals | ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်ရေးကျောင်း
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး Forex Signal ပေးသူ
အခမဲ့ Signal များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြေးနန်းဆက်သွယ်ပါ။
စျေးကွက် ဦး ဆောင်မှု
အပတ်စဉ် Crypto Roundup
BTC, ETH, XRP & LTC နည်းပညာဆိုင်ရာအလားအလာ
ခရက်ဒစ် 0.25 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
တစ်နေ့လျှင်တိကျ။ အကျိုးအမြတ်ရှိသည့်အချက်ပြ ၁၀ ချက်အထိရှိသည်
Forex နှင့် Crypto Signals များအလွယ်တကူရနိုင်သည်
တက်ကြွသောကုန်သည် ၁၅၀၀၀ ကျော်၏ရပ်ကွက်တစ်ခု
Real-time alerts များ၊
Telegram Group နှင့်ဆက်သွယ်ပါ
Tron စျေးနှုန်းအားသုံးသပ်ခြင်း - Aprilပြီ ၉
သောကြာနေ့, ဧပြီ 9, 2021
Tron (TRX) သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ပတ်အတွင်းအကျိုးအမြတ် ၁၄၀% ကျော်ရရှိခဲ့ပြီးမကြာမီကာလအတွင်းထပ်မံအကျိုးအမြတ်များရရှိရန်အလားအလာကောင်းများရှိနေသေးသည်။ အချို့သောအစီရင်ခံစာများအရ, ဒီမှာဆယ့်ခြောက်အကြီးဆုံးအကြီးဆုံး cryptocurrency အတွက်အမြတ်အစွန်းများအတွက်အလားအလာကိုအခြေခံအရေးပါသောအခြေခံအချက်များအချို့ကိုဒီမှာ။ ပထမ ဦး စွာ Tron ကွန်ယက်သည် […]
EURJPY သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှဖိအားအောက်တွင်ယန်းသည် ၁၃၀.၀၀၀ အဆင့်မှပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့သည်
EURJPY စျေးနှုန်းလေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း - 9ပြီ ၉ သောကြာနေ့ဥရောပအစည်းအဝေးတွင် EURJPY သည်ကြိုတင်ရက်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းမှရေငွေ့ကို ၁၃၀.၀၀၀ အဆင့်ဖြင့်ရယူပြီးဒေသပေါင်း ၁၃၁.၀၀ ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ဆက်လက်မြင့်တက်နေသည် အဆိုပါစုံတွဲသည် 130.00 အဆင့်သို့ရောက်ရန်ဆွဲဆောင်မှုအားတိုးတက်စေရန် 131.00 အပေါ်ဘက်အတားအဆီးကိုကျော်လွှားရမည်။ နေ့စဉ်ကုမ္ပဏီ […]
အဓိကပံ့ပိုးမှု - ၁၇၄၅ အဓိကခုခံမှု - ၁၇၆၀ - ၁၇၉၀ ရွှေသည်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က ၁၆၇၈-၁၆၈၀ အဆင့်တွင်ကျဆင်းသွားချိန် မှစ၍ ၄.၈၀% အထိမြင့်တက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှည်လျားပြီးအလွန်အဖိုးတန်သောအဖိုးတန်သတ္တုများဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပြီးမနေ့ကဈေးသည်အလွန်မြင့်မားသောအဓိကအဆင့် (၁၇၄၅) နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ဇွန်လတွင်အချိန်အမြင့်ဆုံးသို့ရောက်အောင်တက်နိုင်ခဲ့သည်။
ကဒ်များပေါ်တွင် EUR / AUD ခြေထောက်ပိုမိုမြင့်မား!
EUR / AUD သည်အနီးအနားရှိအတားအဆီးအချို့ထက်ကျော်။ ခုန်ပြီးနောက်ခိုင်မာသောခံနိုင်ရည်ရှိသည့်withရိယာနှင့်ပန်းပါ။ အဆိုပါစုံတွဲသည်ပြောင်းပြန်အချက်ပြချက်များကိုပြသခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့နေဆဲရှည်လျားမသွားမီအတည်ပြုချက်လိုအပ်ပါတယ်။ စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုကဖော်ပြသည်မှာအကျဘက်လှုပ်ရှားမှုပြီးဆုံးပြီး၎င်းသည်ခြေထောက်အသစ်တစ်ခုကိုပိုမိုမြင့်တက်စေနိုင်သည်ဟုဖော်ပြသည်။ တိုတောင်းသောကာလ၌မတည်ငြိမ်မှုမြင့်မားသည်။
GBP / JPY သည်အောက်သို့ရွေ့လျားနေဆဲ၊ အထောက်အပံ့ကိုအဆင့် ၁၄၉.၅၇ တွင်ရှာနိုင်သည်
အဓိကခံနိုင်ရည်ရှိမှုအဆင့် - ၁၅၀.၀၀၀၊ ၁၅၂.၀၀၀၊ ၁၅၄.၀၀၀ အဓိကပံ့ပိုးမှုအဆင့် - ၁၄၆.၀၀၀၊ ၁၄၄.၀၀၀၊ ၁၄၂.၀၀၀ GBP / JPY စျေး - ရေရှည်လမ်းကြောင်း - BullishGBP / JPY ဟာ uptrend ဖြစ်ပေမယ့်လက်ရှိအဆင့်မှာ ၁၅၃.၀၀ မှာပယ်ချခံနေရပါတယ်။ မကြာသေးမီကအမြင့်ဆုံးတွင်ငြင်းပယ်ခံရပြီးနောက်ပေါင်ကျဆင်းခဲ့သည်။ ပေါင်ဈေးနှုန်းသည် ၂၁ ရက် SMA ကိုကျဆင်းခဲ့ပြီး ၅၀ ရက် SMA သို့နီးကပ်လာသည်။ အောက်ကအနားယူသည် […]
Binance (BNBUSD) စျေးနှုန်းသည် ၄၈၅ ဒေါ်လာအထိတက်နိုင်သည်
BNBUSD စျေးနှုန်းအားသုံးသပ်ခြင်း - Aprilပြီလ ၉။ နွားများသည်အရှိန်အဟုန်ကိုဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်သည်သို့မဟုတ်တိုးမြှင့်ကာဒေါ်လာ ၄၂၀ အဆင့်၏ခုခံမှုအဆင့်ကိုထိုးဖောက်နေ သ၍ နောက်ထပ်ဒေါ်လာဈေး ၄၈၅ နှင့် ၅၄၅ ခုတို့ကိုစမ်းသပ်နိုင်လိမ့်မည်။ ဒေါ်လာ ၃၆၄ ဈေးနှုန်းကိုပြိုကွဲခြင်းသည်အကြွေစေ့အား ၃၁၁ ဒေါ်လာနှင့် ၂၅၄ ဒေါ်လာသို့ပြလိမ့်မည် […]
Polkadot (DOT) သည်ခုခံမှုအားဒေါ်လာ ၄၀ ဖြင့်ချိုးဖဲ့သည် Uptrend ကိုပြန်လည်စတင်သည်
အဓိကခံနိုင်ရည်အဆင့် - $ 40, $ 42, $ 44Key အထောက်အပံ့အဆင့် - $ 30, $ 28, $ 26 Polkadot (DOT) စျေးရှည်ရေရှည် Trend: BullishOn 2ပြီလ ၂ ရက်နေ့တွင် ၀ ယ်သူများက DOT ဈေးကို $ 40 ခုထက်ကျော်လွန်အောင်တွန်းပို့ကြသည်။ altcoin အမြင့်ဆုံး $ 46.74 မှစုဝေးပေမယ့်ခုခံခဲ့သည်။ ဒီ breakout နှင့်အတူ, crypto ဖေဖော်ဝါရီလ 20 ၏အကွာအဝေးလှုပ်ရှားမှုကျိုးပဲ့သို့သော်လွန်ခဲ့သော 48 နာရီအဘို့, ဒင်္ဂါးပြား […]
ကြာသပတေးနေ့, ဧပြီ 8, 2021
မတ်လအစည်းအဝေးအတွက် ECB မိနစ်သည် EURUSD ကိုထောက်ခံခဲ့သည်။ အမေရိကန်ဘဏ္fiscalာရေးဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုကြောင့်မူဝါဒချမှတ်သူများအနေဖြင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အန္တရာယ်များကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ဤအတောအတွင်းကာလတိုငွေဖောင်းပွမှုနှုန်းမြင့်မားနေသော်လည်းငွေကြေးဖောင်းပွမှုမှာနိမ့်ကျနေပြီးဗဟိုဘဏ်၏ရည်မှန်းချက်အောက်တွင်သာရှိနေသင့်သည်။ မူဝါဒချမှတ်သူများသည်အမြတ်အစွန်းကိုလျော့ချရန်အတွက် 2Q21 တွင် PEPP ဝယ်ယူမှုကိုအရှိန်မြှင့်ရန်ကတိပြုခဲ့သည်။ မူဝါဒချမှတ်သူများ […]
ကြာသပတေးနေ့တွင်ယူရိုငွေကြေးလဲလှယ်မှုနှုန်းသည်လက်တွေ့မပြောင်းလဲဘဲရှိနေသည်။ ယူရို / အမေရိကန်ဒေါ်လာသည်လက်ရှိတွင် ၁.၁၈၈၀ ဖြင့်တစ်နေ့လျှင် ၀.၀၇ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်နေသည်။ သီတင်းပတ်၏အစတွင်ယူရိုသည်အလွန်ပူပြင်းခဲ့သည်။ EUR / USD အတွဲသည် ၁.၀% တိုးတက်ခဲ့ပြီး ၂ ပတ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်တက် အဆိုပါ 1.1880 အဆင့်ကိုအထက်။ သို့သော်ထိုစုံတွဲ […]
Gold (XAUUSD) သည် $ 1,750 Resistance ကိုချိုး ဖျက်၍ Uptrend ကိုပြန်လည်စတင်သည်
အဓိကခံနိုင်ရည်အဆင့် - $ 1,900, $ 1,950, $ 2000Key အထောက်အပံ့အဆင့် - $ 1,750, $ 1, 700, $ 1,650 Gold (XAUUSD) ရေရှည် Trend: RangingGold သည်စျေးနှုန်းသည်ခုခံမှုကိုချိုးဖောက်ခြင်းအားဖြင့် $ 1,750 ဖြင့်အပြုသဘောဆောင်သောရွေ့လျားမှုများပြုလုပ်နေသည်။ အီရန်အရှိန်အဟုန်ကိုဆက်ထိန်းထားပါက XAUUSD သည်အကွာအဝေးရှိဇုန်တွင်ရှိလိမ့်မည်။ အဆိုပါအထက်သို့ပြောင်းရွှေ့ $ 1,800 နှင့် $ 1,840 မှာခုခံရင်ဆိုင်ရပေမည်။ ယခင်စျေးနှုန်းဖြင့် […]
အကောင်းဆုံး FOREX လက္ခဏာများ
ကျွန်ုပ်တို့၏လိုက်နာပါ အခမဲ့ Forex အချက်ပြမှုများ cryptocurrencies, ကုန်စည်နှင့်ညွှန်းကိန်းအပေါ်
စျေးကွက်နှင့်အတူအခွင့်အလမ်းများကိုဖမ်းပြီး အကောင်းဆုံး Forex ပွဲစားများ
FOREX ပွဲစားများ &
Forex ပွဲစားများအတွက် Ultimate လမ်းညွှန်
ပွဲစားတစ်ယောက်သည် Forex ဈေးကွက်တွင်အဓိကကျသောအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်မှာသေချာသည်။ သို့သော်ပွဲစားတစ်ယောက်အနေနှင့်ပွဲစားများမည်သည့်အခန်းကဏ္ play မှပါဝင်သည်ကိုသင်နားလည်ပါသလား။ ငါတို့ဖတ်ပါ ဒီမှာ Forex ပွဲစားများ၏လမ်းညွှန် Forex ပွဲစား၏အဓိကအခန်းကဏ္knowကိုသိရန်။
ကုန်သွယ်မှုများစွာကို Forex စျေးကွက်တွင်လေ့လာသူအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရမည်။ သို့သော်သင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးသော Forex trading platform ကိုသင်ထပ်မံလိုအပ်သည်။ အဲဒါကြောင့် ဒီမှာငါတို့စာမျက်နှာကရှင်းပြသည် အစပြုသူများအတွက်အကောင်းဆုံး Forex Trading ပလက်ဖောင်းများ။
တစ် ဦး ကုန်သွယ်ရေးဂျာနယ်ထားပါ
ကုန်သွယ်ရေးဂျာနယ်သည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုလုပ်ဆောင်မှုအားလုံး၏မှတ်တမ်းတစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဂျာနယ်သည်ပြင်းထန်သောကုန်သည်များအတွက်မိမိတို့ကိုယ်ကိုဓမ္မဓိively္ဌာန်ကျကျအကဲဖြတ်ရန်ကိရိယာတစ်ခုပေးသည်။ သို့သော်သီးခြားဂျာနယ်တစ်ခုထားရှိခြင်းသည်မည်မျှအရေးပါသနည်း။ မင်းသိထားသင့်သမျှကိုပြောပြပါ ဒီမှာ.
အတိုးနှုန်းပြောင်းလဲမှုသည် Forex စျေးကွက်ကိုသိသိသာသာလွှမ်းမိုးသည်။ အပြောင်းအလဲများကိုများသောအားဖြင့်ကမ္ဘာ့ဗဟိုဘဏ်ရှစ်ခုမှတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်သည်။ အပြောင်းအလဲများသည်စျေးကွက်ကုန်သည်များအပေါ်ချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ထို့ကြောင့်မည်ကဲ့သို့တုန့်ပြန်ရမည်ကိုနားလည်ခြင်းသည်၎င်းရွေ့လျားမှုကိုပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်စေလိမ့်မည် အမြတ်အစွန်းများများရရှိရန်ခြေလှမ်းများ.
ကုန်သွယ်မှုအတွက်လေ့လာပါသင်ဟာကမ္ဘာပေါ်တွင်စတင်နေပြီဆိုလျှင် အွန်လိုင်းကုန်သွယ်မင်းသေချာတာပေါ့၊ သင်၏ကုန်သွယ်ရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုညာဘက်ခြေထောက်ပေါ်ရောက်အောင်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကသင့်အားလိုအပ်သည့်ကိရိယာများဖြင့်သယ်ဆောင်ပေးလိမ့်မည်။
အရာအားလုံးကုန်သွယ်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်များကိုပေးသည်။ ထိုကဲ့သို့သောပေါင်ပေါင်းများစွာထရီလီယံ Forex လုပ်ငန်းသည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်၊ CFD များကဘာလဲ၊ သင်၏ရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပန်းတိုင်များ၊ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ရန်ပုံငွေများကိုစွန့်စားခြင်းမပြုမီသင်သိသင့်တယ်ထင်ပါတယ်။
အရေးကြီးဆုံးမှာကျွန်ုပ်တို့၏ပညာရေးဆိုင်ရာကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ အချိန်ဖြုန်းခြင်းအားဖြင့်သင်၏အွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုကြိုးပမ်းမှုအောင်မြင်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စင်မြင့်ကိုလိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ဗဟုသုတများဖြင့်သင်ထားခဲ့ပါလိမ့်မည်။
Beginners for Trading: အွန်လိုင်းကုန်သွယ်ရေးဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
သင်၏ဘ ၀ တွင်ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုမျှဘယ်သောအခါမျှမလုပ်ခဲ့ပါကသင်၏ငွေနှင့်မခွဲခွာမီသင်ဘာလုပ်နေသည်ကိုသင်သိရန်မှာအခြေခံကျသည်။ နောက်ဆုံးတွင်အွန်လိုင်းအရောင်းအဝယ်သည်အန္တရာယ်များစွာနှင့်ကြုံတွေ့ရပြီးအများစုမှာအမြတ်အစွန်းရရန်သင်၏စွမ်းရည်ကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ၃၆၀ ဒီဂရီခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အရအဆုံးသို့အဆုံးသို့ကုန်သွယ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုစတင်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြပါစို့။
အွန်လိုင်းမှကုန်သွယ်ရန်သင်ပွဲစားတစ်ယောက်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ရှေးရိုးစွဲ stockbroker ဖြင့်ဖုန်းကိုအမှာစာဝယ်ရန်နှင့်ရောင်းရန်လိုအပ်သည့်နေ့ရက်များရှိသည်။
ဆန့်ကျင်တွင်, အားလုံးယခုအွန်လိုင်းကွပ်မျက်ခံရသည်။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်သက်သောင့်သက်သာရှိသောနေရာမှသင်ကုန်သွယ်နိုင်ရုံသာမကအွန်လိုင်းပွဲစားများသည်ယခုအခါအပြည့်အဝကုန်သွယ်မှုအက်ပလီကေးရှင်းများကိုပေးသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, သငျသညျယခုပြောင်းရွှေ့နေစဉ်ကုန်သွယ်မှုနိုင်ပါတယ်။
ထိုသို့ပြောခြင်းနှင့်အတူနေ့စဉ်လက်လီဖောက်သည်များအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောထောင်နှင့်ချီသောအွန်လိုင်းပွဲစားများရှိသည်။ တဖကျတှငျ, သငျသညျကုန်သည်တစ် ဦး အဖြစ်သင့်ရှုထောင့်ကနေအလွန်အကျိုးရှိသောကြောင့်ပလက်ဖောင်းများ၏အလွန်အမင်းပြည့်နှက်နေခြင်းကြောင့်ပွဲစားများသည်ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုကျော်လွှားရန်ပွဲတက်ရန်လိုအပ်သည်။
၎င်းသည်ကုန်သွယ်ခွန်လျှော့ချခြင်းနှင့်ပိုမိုတင်းကျပ်သောပြန့်ပွားမှုများသို့မဟုတ် 'Copy Trading' ကဲ့သို့သောဆန်းသစ်သောအင်္ဂါရပ်များဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ ၎င်းသည်မည်သည့်အွန်လိုင်းကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းကိုမှတ်ပုံတင်ရမည်ကိုသိရန်အလွန်ခက်ခဲစေသည်။
ယူကေအခြေစိုက်လက်လီဖောက်သည်များအားအွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှု ၀ န်ဆောင်မှုများပေးအပ်ရန်အတွက်ပွဲစားများကိုဘဏ္Conာရေးဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့ (FCA) မှစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ရမည်။ ထို့ကြောင့်စင်မြင့်အသစ်ကိုရွေးချယ်ရာတွင်၎င်းသည်ညှိနှိုင်း။ မရသောလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
များသောအားဖြင့်အွန်လိုင်းပွဲစားသည် FCA မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ကိုစာရင်းပြုစုလိမ့်မည်။ ထို့နောက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်မှတစ်ဆင့်ကူးပြောင်းနိုင်သည်။ မအောင်မြင်ပါက FCA မှတ်ပုံတင်မှတဆင့်ပွဲစား၏အမည်ကိုအွန်လိုင်းတွင်ရှာဖွေနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ပွဲစားသည် FCA လိုင်စင်ကိုမရရှိပါကကုန်ကျစရိတ်အားလုံးနှင့်သင်စင်မြင့်ကိုရှောင်ရှားသင့်သည်။
ရန်ပုံငွေများငွေသွင်းခြင်းနှင့်ထုတ်ယူခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်မည်သည့်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုသင်အသုံးပြုလိုသည်ကိုလည်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းမှာငွေသွင်းခြင်းသည်ချက်ချင်းဖြစ်သောကြောင့် debit သို့မဟုတ် credit card မှတစ်ဆင့်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်အချို့ပွဲစားများကသင့်အား PayPal သို့မဟုတ် Skrill ကဲ့သို့သော e-wallet ကိုသုံးရန်ခွင့်ပြုသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အမြဲတမ်းထိုသို့မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင်ပွဲစားအများစုသည်ဘဏ်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းကိုအထောက်အကူပြုသည်။ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်ပိုမိုမြင့်မားသောကန့်သတ်ချက်များကိုခွင့်ပြုသော်လည်းဘဏ်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းသည်အနှေးဆုံးငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ပွဲစားများသည်ငွေရှာခြင်းလုပ်ငန်း၌ရှိသည့်အတွက်အွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုရန်အတွက်သင်ကအခကြေးငွေပေးရလိမ့်မည်။ သငျသညျအမျိုးမျိုးသောကော်မရှင်, သင်ကုန်သွယ်မှုပမာဏ၏ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သောပေးဆောင်ဖို့လိုအပ်ပေလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်ကုန်သွယ်မှုကိုပေါင် ၄၀၀၀ တန်ဖိုးရှိသည့်ပွဲစားနှင့်ကော်မရှင်တွင် ၀.၂% ကောက်ခံပါက£ 4,000 ပေးရလိမ့်မည်။
ကော်မရှင်၏ထိပ်တွင်, သင်သည်လည်းပြန့်ပွားစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ ဤသည်မှာ '၀ ယ်ယူ' သောစျေးနှုန်းနှင့် 'ရောင်း' သောကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ပြန့်ပွားမှုမြင့်မားလျှင်၊ ၎င်းသည်တသမတ်တည်းအမြတ်အစွန်းရရန်သင်၏စွမ်းရည်ကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ပြန့်ပွားမှုသည်အမှန်တကယ်ကမ္ဘာရာခိုင်နှုန်း ၁% ဖြစ်လျှင်အနည်းဆုံး ၁% လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
ပွဲစားမှစီစဉ်သည့်ဘဏ္financialာရေးတူရိယာအရေအတွက်နှင့်အမျိုးအစားနှင့် ပတ်သက်၍ စဉ်းစားရန်လည်းသင်လိုအပ်သည်။ များစွာသောကိစ္စရပ်များတွင်အွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းများသည် Forex နှင့် CFD များကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်။ ယခင်နှင့်စပ်လျဉ်း။ သေးငယ်သည့်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများမှအမြတ်အစွန်းရရှိစေရန်အတွက်ငွေကြေးကိုသင်ရောင်းဝယ်သည်။
CFDs (Contract-for-differenals) တွင်၎င်းသည်သင့်အားပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပိုင်ဆိုင်ရန်မလိုဘဲမည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားကိုမဆိုခန့်မှန်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဥပမာ CFDs သည်ရှယ်ယာများနှင့်အစုရှယ်ယာများ၊ ရွှေ၊ ရေနံ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ စတော့စျေးကွက်ညွှန်းကိန်းများ၊ အတိုးနှုန်းများ၊ အနာဂတ်နှင့် cryptocurrencies မှမည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းကိုမဆိုကုန်သွယ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
သင်ဟာနည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းများအပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အာရုံစိုက်သည့်ပွဲစားကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့သောကိရိယာများသည်သင့်အားအဆင့်မြင့်သောကိစ္စရပ်များတွင်သမိုင်းဆိုင်ရာစျေးနှုန်းများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သင်ရွေးချယ်ထားသောပိုင်ဆိုင်မှု၏အနာဂတ် ဦး တည်ရာနေရာကိုအကဲဖြတ်ရန်အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းကိုသင်ရရှိသည်။
လူသိများသောနည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းများတွင် stochastic oscillators၊ ရွေ့လျားသည့်ပျမ်းမျှများ (MA)၊ ဆွေမျိုးအင်အားညွှန်းကိန်း (RSI) နှင့် bollinger ကြိုးများပါ ၀ င်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်နည်းပညာညွှန်းကိန်းများစွာပေးသောအွန်လိုင်းကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများကိုသင်ရွေးချယ်သင့်သည်။
Online Trading Platform ဖြင့် Account တစ်ခုဖွင့်ပါ
သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးမည့်အွန်လိုင်းပွဲစားကိုသင်ရွေးချယ်ပြီးပါကသင် account တစ်ခုဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် ၅ မိနစ်မှ ၁၀ မိနစ်ထက်မပိုပါ။ အမှန်ကတော့ပွဲစားကမင်းဟာဘယ်သူလဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်။ အွန်လိုင်းမှာကုန်သွယ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိမရှိသိဖို့လိုတယ်။ FCA မှဖော်ပြထားသောစည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရန်ပလက်ဖောင်းသည်သေချာစေရန်ဖြစ်သည်။
ကုန်သွယ်ရေး site တစ်ခုနှင့်အကောင့်ဖွင့်သောအခါသင်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုထည့်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းတွင်သင်၏အမည်အပြည့်အစုံ၊ အိမ်လိပ်စာ၊ မွေးသက္ကရာဇ်၊ နိုင်ငံသားအာမခံနံပါတ်နှင့်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်တို့ပါဝင်သည်။
ပွဲစားသည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုအတွေ့အကြုံနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများမေးလိမ့်မည်။ ၎င်းတွင်သင်ယခင်ကသင်ရောင်းဝယ်ခဲ့သောပစ္စည်းအမျိုးအစားနှင့်ပျမ်းမျှကုန်သွယ်မှုပမာဏတို့ပါ ၀ င်သည်။
ငွေကြေးခ ၀ ါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေများနှင့်အညီဆက်လက်နေထိုင်နိုင်ရန် FCA စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများချမှတ်ထားသောကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းအားလုံးသည်သင်၏မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်လိုအပ်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်သည်အတော်အတန်လွယ်ကူပြီးသင့်အစိုးရထုတ်ပေးသော ID မိတ္တူနှင့်လိပ်စာအထောက်အထားများကိုတင်ရန်သင်သာလိုအပ်သည်။
အချို့ပွဲစားများသည်သင့်အားအတည်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မပြီးဆုံးမီရန်ပုံငွေများကိုထည့်သွင်းရန်ခွင့်ပြုသော်လည်းသင်၏စာရွက်စာတမ်းများအားအတည်မပြုမီအထိငွေထုတ်ရန်သင်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်၊ အကောင့်ဖွင့်သည်နှင့် KYC (သင်၏ဝယ်သူအားသိထားပါ) လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလမ်းမှဖယ်ထုတ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဒက်ဘစ်နှင့်အကြွေးကဒ်ဖြင့်ငွေသွင်းခြင်းသည်များသောအားဖြင့်ရန်ပုံငွေများချက်ချင်းရရှိနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုသုံးလျှင်အခကြေးငွေများကိုစောင့်ကြည့်ပါ ပွဲစားတစ်ယောက်သည်သင့်အားတစ်စုံတစ်ရာသောအခကြေးငွေများကိုမတောင်းခံနိုင်သော်လည်းခရက်ဒစ်ကဒ်ထုတ်ပေးသူသည်ငွေအားကြိုတင်ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ပါကအတိုးကိုချက်ချင်းလျှောက်ထားပြီး ၃% သောအခကြေးငွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည်။
အွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းအများစုသည်ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းကိုလက်ခံလိမ့်မည်။ ကန့်သတ်ချက်များသည်များသောအားဖြင့်ပိုမိုများပြားသော်လည်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်ဒက်ဘစ်ကဒ်ငွေပေးချေခြင်းထက်များစွာနှေးသည်။ အကယ်၍ အပ်ငွေကို UK Faster Payments မှတဆင့်ပြုလုပ်ပါကရန်ပုံငွေများကိုတစ်နေ့တည်းတွင်သာရရှိနိုင်သည်။
ဒက်ဘစ်ကဒ်သို့မဟုတ်ဘဏ်ငွေလွှဲပြောင်းခြင်းတို့ထက်အတွေ့ရများသော်လည်းခေတ်သစ်ပွဲစားများသည်ယခု e-ပိုက်ဆံအိတ်ကိုလက်ခံကြသည်။ ၎င်းတွင် PayPal၊ Skrill နှင့် Neteller တို့ပါဝင်သည်။ E-ပိုက်ဆံအိတ်သိုက်များသည်အခမဲ့မဟုတ်ဘဲများသောအားဖြင့်သင့်ငွေများကိုသင်၏အမြန်ဆုံးအချိန်ဇယားအတိုင်းပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။
ထရီလီယံပေါင်မြောက်သော Forex နေရာမှအမြတ်အစွန်းကိုသင်စိတ်ဝင်စားလိုပါကသင်ဝယ်ယူရန်နှင့်ရောင်းရန်ရှိသည်။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အယူအဆသည်ငွေလဲလှယ်နှုန်းပြောင်းလဲချိန်တွင်အမြတ်အစွန်းရရှိရန်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်သင်သည်မတူညီသောငွေကြေးနှစ်ခုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော Forex 'pair' တစ်ခုကိုအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်ကပေါင်စတာလင်ကိုယူရိုငွေနဲ့လဲလှယ်ချင်တယ်ဆိုရင် GBP / EUR ကိုရောင်းဖို့လိုလိမ့်မယ်။
ထိုသို့ပြောဆိုခြင်းအားဖြင့်ပွဲစားအချို့သည်မတူညီသောငွေကြေးအတွဲ ၁၀၀ ကျော်ကိုစာရင်းပြုစုလိမ့်မည်။ ဤငွေကြေးအတွဲများကိုအဓိကအမျိုးအစားသုံးမျိုးခွဲခြားသည်။
နာမ၌ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအဓိကအတွဲများသည် 'အဓိက' ငွေကြေးနှစ်မျိုးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်းတွင်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစီးပွားရေးများဖြစ်သောအမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ဗြိတိသျှပေါင်၊ ယူရို၊ ဂျပန်ယန်းနှင့်ဆွစ်ဖရန်စသည့်ငွေကြေးများပါဝင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် Forex trading လောကတွင်စတင်နေပြီဆိုလျှင်အဓိကအတွဲများနှင့်အတူတကွပေါင်းသင်းသင့်သည်။ အကြောင်းမှာအဓိကကုမ္ပဏီများသည်မတည်ငြိမ်မှုနည်းပါးခြင်း၊ ပိုမိုတင်းကျပ်သောပြန့်ပွားမှုများနှင့်ငွေဖြစ်လွယ်မှုအမှိုက်များကိုကြုံတွေ့ရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
အသေးစားအတွဲများသည်အဓိကငွေကြေးတစ်ခုနှင့်အရည်တစ်မျိုးလျော့နည်းသည်။ AUD / USD သည်အသေးစားစုံတွဲတစ်တွဲ၏အဓိကဥပမာဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ဒေါ်လာသည်ထိုစုံတွဲ၏အဓိကငွေကြေးကိုကိုယ်စားပြုပြီးသြစတြေးလျဒေါ်လာသည်ဝယ်လိုအားနည်းသောငွေကြေးဖြစ်သည်။
အရွယ်မရောက်သေးသူများသည်ငွေအလုံအလောက်ရရှိခြင်းမှအကျိုးကျေးဇူးရရှိသော်လည်းပြန့်ပွားမှုသည်ဗိုလ်ကြီးများထက်များစွာကျယ်ပြန့်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကုန်သွယ်ရေးအရွယ်မရောက်သေးသူများသည်ရေရှည်တွင်ပိုမိုဈေးကြီးသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဤသို့ဆိုလျှင်အသေးစားအတွဲများတွင်မတည်ငြိမ်မှုသည်အနည်းငယ်မြင့်မားသောကြောင့်ပိုမိုကြီးမားသောအကျိုးအမြတ်ရရှိရန်အခွင့်အလမ်းများစွာရှိသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ, ထူးခြားဆန်းပြားအတွဲအလွန်မတည်ငြိမ်သောနိုင်ပါတယ်, နှင့်ပြန့်ပွားမကြာခဏအလွန်ကျယ်ပြန့်သည်။ ဒါကြောင့်သင်ဟာအဆင့်မြင့်အဆင့်မှာ Forex ကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားဖို့သင်ယူတဲ့အချိန်အထိထူးခြားဆန်းပြားမှုတွေကိုရှောင်ရှားဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။
Forex Trade သည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။
သင်စိတ်ကူးရသောငွေကြေးအတွဲတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးလျှင်စျေးကွက်မည်သည့်လမ်းကိုသွားမည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။ အခြေခံကျကျမလေ့လာမှီ Forex trading ၏အခြေအနေတွင် 'buy' order 'နှင့်' sell 'အကြားခြားနားချက်ကိုရှင်းလင်းရန်အရေးကြီးသည်။
the အကယ်၍ ငွေကြေးသည်ထိုငွေကြေးပေါ်တွင်တည်ရှိသည်ဟုသင်ယုံကြည်ပါက ဘယ်ဘက်ခြမ်း စုံတွဲတစ်တွဲ၏သွား၏ တိုးမြှင့်လာသည် တန်ဖိုးမှာသင်နေရာချရန်လိုအပ်သည် အမှာဝယ်.
the အကယ်၍ ငွေကြေးသည်ထိုငွေကြေးပေါ်တွင်တည်ရှိသည်ဟုသင်ယုံကြည်ပါက ညာဘက်ခြမ်း စုံတွဲတစ်တွဲ၏သွား၏ တိုးမြှင့်လာသည် တန်ဖိုးမှာသင်နေရာချရန်လိုအပ်သည် အမှာစာရောင်း.
ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည် GBP / USD အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည်ဟုဆိုပါစို့။ GBP သည် USD ထက် ပိုမို၍ တန်ဘိုးရှိနိုင်သည်ဟုသင်ထင်မိပါကကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ၀ ယ်ရန်အမှာစာကိုစီစဉ်ပေးပါမည်။ ထိုနည်းတူစွာ USDP သည် GBP နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပိုမိုများပြားလိမ့်မည်ဟုသင်ယူဆပါကသင်ရောင်းရန်မှာထားလိမ့်မည်။
Forex Trading တွင် 'Buy' အမှာစာနမူနာ
GBP / USD အခင်းအကျင်းနှင့် ကပ်၍ 'ဝယ်' ရန်အမိန့်ကိုပေါင် ၅၀၀ ထားရှိသည်ဟုပြောပါစေ။ ဆိုလိုသည်မှာ GBP သည် USD ထက်စျေးနှုန်းပိုမိုမြင့်တက်မည်ဟုသင်ယုံကြည်သည်။
GBP / USD ၏စျေးနှုန်းသည်လက်ရှိတွင် 1.32 ဖြစ်သည်
ပေါင် ၅၀၀ ဝယ်ဖို့အမှာစာချထားတယ်
GBP / USD သည် ၁.၃၄ သို့မြင့်တက်သွားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ GBP သည် USD နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုအားကောင်းလာနေသည်
ဤသည် 1.51% ၏တိုးကိုယ်စားပြု
သင်၏အမြတ်သည်ပေါင် ၇.၅၅ (ပေါင် ၅၀၀ မှ ၁.၅၁%) အထိရှိသည်။
Forex Trading အတွက် 'ရောင်း' အမိန့်၏ဥပမာ
ဒီဥပမာမှာ GBP / USD နဲ့ကပ်နေမယ်။ ဒီတစ်ခေါက်လောက်ပဲရောင်းဖို့အမှာလိုက်မှာပဲ။ ဆိုလိုသည်မှာ USD သည် GBP ထက်သာလွန်မည်ဟုသင်ယုံကြည်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
ပေါင် ၁၅၀၀ ရောင်းမှာပါ
GBP / USD သည် ၁.၂၉ သို့ကျသွားသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ USD သည် GBP နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုအားကောင်းလာနေသည်
၎င်းသည် ၂.၂၇% ကျဆင်းခြင်းကိုကိုယ်စားပြုသည်။
အွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုနယ်ပယ်၏ဒုတိယအဓိကအစိတ်အပိုင်းမှာ CFD များဖြစ်သည်။ အစောပိုင်းကကျွန်ုပ်တို့အတိုချုပ်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း CFD များသည်သင့်အားစိတ်ကူး။ ရသောလူတန်းစားတိုင်းကိုလက်တွေ့နှင့် ၀ ယ်ရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည်။ အကြောင်းမှာသင်သည်၎င်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်အခြေခံပိုင်ဆိုင်မှုကိုပိုင်ဆိုင်ရန်သို့မဟုတ်သိုလှောင်ရန်မလိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
CFDs တွေကဒီပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့အစစ်အမှန်ဈေးကိုခြေရာခံလိုက်ရုံပါပဲ။ ထို့ကြောင့် CFD များသည်အခြားစျေးကွက်များသို့ရောက်ရှိရန်ခက်ခဲသောစျေးကွက်များသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အလွန်အထောက်အကူပြုသည်။
အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ CFDs ဖုံးလွှမ်းသည့်အဓိကပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းများကိုစာရင်းပြုစုထားသည်။
✔️ Hard Metals
CFD ကုန်သွယ်ရေးအမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းသည် Forex အတွဲများကို ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ ဤအဆင့်တွင်သင်သတိပြုမိရန်လိုအပ်သောအဓိကခြားနားချက်မှာဝေါဟာရဖြစ်သည်။ Forex တွင်အရောင်းအဝယ်များကို ၀ ယ်ရန်သို့မဟုတ်ရောင်းရန်အမိန့်အဖြစ်ပုံမှန်အားဖြင့်သတ်မှတ်သော်လည်း CFD နေရာတွင် 'long' နှင့် 'short' ဟူသောဝေါဟာရများကိုအသုံးပြုသည်။
ထို့အပြင် CFD များသည် Forex ကဲ့သို့အတွဲများမပါ ၀ င်ပါ။ အဲဒီအစား, သင်ပုံမှန်အားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြစ်သောကြီးစိုးငွေကြေး၏အစစ်အမှန်ကမ္ဘာတန်ဖိုးကိုဆန့်ကျင်ပိုင်ဆိုင်မှုကုန်သွယ်နေကြသည်။ ဥပမာ CFDs များကိုသင်သိုလှောင်ထားသည့်ပမာဏ၊ ရေနံ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့်ရွှေတို့ဖြင့်ရောင်းဝယ်သည်ဖြစ်စေအမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအဖိုးတန်သည်။
the ပိုင်ဆိုင်မှုသွားမည်ဟုသင်ယုံကြည်ပါက တိုးမြှင့်လာသည် တန်ဖိုးမှာသင်နေရာချရန်လိုအပ်သည် ရှည်လျားသော အမိန့်။
the ပိုင်ဆိုင်မှုသွားမည်ဟုသင်ယုံကြည်ပါက လြော့ပေါ့စေ တန်ဖိုးမှာသင်နေရာချရန်လိုအပ်သည် တိုတောင်းသော အမိန့်။
CFDs များကိုအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ခြင်း၏ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးသောအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်တန်ဖိုးဆုံးရှုံးမှုပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်ခန့်မှန်းနေကြသည်နေရာအရပ်ဖြစ်၏။ ဤသည်မှာရိုးရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနေရာ၌လက်လီဖောက်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်ပြန်လည်ပုံတူကူးရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်။
သငျသညျရေရှည်အခြေခံပေါ်မှာစတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ဖို့ရှာနေလျှင်, သင်တစ် ဦး သမားရိုးကျစတော့အိတ်ချိန်းမှသင်ရွေးချယ်သောအစုရှယ်ယာများဝယ်ယူရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ အကြောင်းမှာသင်သည်အစုရှယ်ယာများကိုလုံးလုံးလျားလျားပိုင်ဆိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအားအကာအကွယ်ပေးထားသောအကာအကွယ်များနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။
သိုမဟုတ်သိုလှောင်ရုံကိုရေတိုအခြေခံအရောင်းအဝယ်လုပ်လိုလျှင် CFD ပလက်ဖောင်းကိုသုံးရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်စတော့ရှယ်ယာများ ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအခကြေးငွေများသည် CFD များထက်များစွာမြင့်မားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် - လက်လီဖောက်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်သင်ရွေးချယ်ထားသည့်ရှယ်ယာများကိုတိုတောင်းသောကာလအတွင်းရောင်းရန်အခွင့်အလမ်းအနည်းငယ်သာရှိလိမ့်မည်။ ဤတစ်ကြိမ်တွင် CFD ပလက်ဖောင်းအားလုံးနီးပါးကကမ်းလှမ်းထားသောအရာဖြစ်သည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ အကယ်၍ သင်ကကမ္ဘာ့စတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်များကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင် ၀ င်ရောက်လိုပါက၊ သင်၌ရှယ်ယာတစ်မျိုးချင်းစီဝယ်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းသို့မဟုတ်အညွှန်းတစ်ခုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းစသည့်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိလိမ့်မည်။
✔️တစ် ဦး ချင်းအစုရှယ်ယာရောင်းဝယ်ခြင်း
သင့်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းစီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှုများရှိပါကထောင်ပေါင်းများစွာသော CFD ရှယ်ယာများကိုသင်ရရှိနိုင်သည်။ ၎င်းတွင် NASDAQ နှင့် London Stock Exchange စသည့်နာမည်ကြီးစျေးကွက်များ၌စာရင်းဝင်သည့်အပြာရောင်ချစ်ပ်ကုမ္ပဏီများနှင့်အသေးစားနှင့်အလတ်စားကုမ္ပဏီများပါဝင်သည်။
CFD လမ်းကြောင်းရွေးချယ်ပါကသင်ရွေးချယ်ထားသောရှယ်ယာများ၏တန်ဖိုးသည်ပိုင်ဆိုင်မှု၏တကယ့်ကမ္ဘာစျေးနှုန်းနှင့်တူညီသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ၂၄ နာရီအတွင်း British American Tobacco ရှယ်ယာများ၏ဈေးနှုန်းသည် ၂.၃% မြင့်တက်ပါက၎င်း၏သက်ဆိုင်ရာ CFD သည် ၂.၃% အထိမြင့်တက်လာလိမ့်မည်။
a စတော့စျေးကွက်ညွှန်းကိန်းအရောင်းအ ၀ ယ်
အကယ်၍ သင်သည်အစုရှယ်ယာနှင့်အစုရှယ်ယာများရောင်းဝယ်လိုလျှင်သင်တစ် ဦး ချင်းစီကိုရွေးချယ်ရန်သင်လိုအပ်သောအသိပညာမရှိပါကစတော့စျေးကွက်ညွှန်းကိန်းကိုစဉ်းစားသင့်သည်။
'indices' ဟုလည်းရည်ညွန်း။ စတော့စျေးကွက်ညွှန်းကိန်းများသည်ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုတည်းတွင်ရာနှင့်ချီသောကုမ္ပဏီများကိုခန့်မှန်းရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည်။
ဥပမာ S&P 500 ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအားဖြင့် US-list အများဆုံးကုမ္ပဏီများမှရှယ်ယာများကိုသင်ဝယ်ယူနိုင်သည်။ အလားတူစွာ FTSE 500 အညွှန်းကိန်းသည်လန်ဒန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင်စာရင်းပြုစုထားသောအကြီးဆုံးကုမ္ပဏီ ၁၀၀ တွင်သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ခွင့်ပြုသည်။
တစ်ဖန်၊ အကယ်၍ စတော့စျေးကွက်ညွှန်းကိန်းကို CFD ပုံစံဖြင့်ရွေးချယ်ပါကသင်သည်ရှည်လျားသော (သို့) တိုတိုသွားရန်ရွေးချယ်စရာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သင့်အနေဖြင့်ကျယ်ပြန့်သောစတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်များကျဆင်းသွားသည့်တိုင်သင့်အနေဖြင့်အမြတ်အစွန်းရရှိရန်အခွင့်အလမ်းရှိနေသေးသည်။
သင် Forex နှင့် CFDs များရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည်ဖြစ်စေ၊ ပြန့်ပွားမှုအကြောင်းသင်ကောင်းစွာနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်း၏အခြေခံအကျဆုံးပုံစံအနေဖြင့်ဤသည်မှာ“ ၀ ယ်ခြင်း” စျေးနှုန်းနှင့်“ ရောင်း” ခြင်းအကြားခြားနားချက်ဖြစ်သည်။ ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်များ၏ထိပ်တွင်အွန်လိုင်းပွဲစားများသည်ငွေရှာရန်သေချာစေသည်။
သင်သွယ်ဝိုက်ပေးဆောင်ရသောမည်သည့်အခကြေးငွေကိုပြသသောကြောင့်ပြန့်ပွားမှုပမာဏသည်ကုန်သည်တစ် ဦး အနေနှင့်သင့်အတွက်အရေးကြီးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ စတော့အရောင်းအ ၀ ယ်တွင် ၀.၅% ကွာဟမှုရှိပါကအနည်းဆုံး ၀.၅% အကျိုးအမြတ်ကိုပင်ချိုးဖောက်ရန်လိုအပ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
CFD များကိုအရောင်းအဝယ်ပြုသည့်အခါပြန့်ပွားမှုကိုတွက်ချက်ရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှာ ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းစျေးနှုန်းအကြားရာခိုင်နှုန်းကွာခြားမှုကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းတွက်ချက်ရန်ဖြစ်သည်။
သငျသညျရေနံအပေါ် '' ရှည်လျား '' သွားရှာကြသည်
မင်းရဲ့ပွဲစားက ၀ ယ်မယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာ ၇၁ ရမယ်
ရောင်းဈေးက ၆၉ ဒေါ်လာပါ
ဆိုလိုသည်မှာပြန့်ပွားမှုသည်ဒေါ်လာ ၆၉ နှင့် ၇၁ ကြားကွာခြားချက်ဖြစ်သည်
ရာခိုင်နှုန်းအချိုးအစားအရ, ဒီပျံ့နှံ့ 2.89%
သင်သည်ရေနံကိုကြာရှည်စွာဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်သည်ဖြစ်စေမည်သို့ပင်သင်သည် ၂.၈၉% ပြန့်ပွားလိမ့်မည်။ ဆိုလိုတာကတော့သင်ချိုးဖျက်နိုင်ဖို့အနည်းဆုံး ၂.၈၉% အကျိုးအမြတ်အတွက်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်ကိုဆိုလိုသည်။
go သင်သွားလျှင် ရှည်လျားသော ရေနံအတွက်, သင်ပေးဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် $71။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ရာထူးကိုချက်ချင်းထွက်လျှင်၊ သင်ရောင်းချသည့်စျေးနှုန်းအတိုင်းပြုလိမ့်မည် $69။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, သင်ဆီမှစျေးနှုန်းလိုအပ်ပါတယ် တိုးမြှင့်လာသည် by 2.89% တောင်မှချိုးဖျက်ဖို့။
go သင်သွားလျှင် တိုတောင်းသော ရေနံအတွက်, သင်ပေးဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် $69။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ရာထူးမှချက်ချင်းထွက်လျှင်၊ သင်သည်စျေးနှုန်းဖြင့်ဝယ်မည် $71။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, သင်ဆီမှစျေးနှုန်းလိုအပ်ပါတယ် လြော့ပေါ့စေ by 2.89% တောင်မှချိုးဖျက်ဖို့။
Leverage သည်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းပြီးအလွန်အမင်းအန္တရာယ်များသော tool တစ်ခုဖြစ်သည်။ အတိုချုပ်ပြောရရင် leverage ဆိုတာသင့်ရဲ့ပွဲစားစာရင်းမှာရှိတာထက်ပိုပြီးအဆင့်မြင့်အရောင်းအဝယ်လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုထားတယ်။ သတ်သတ်မှတ်မှတ်ပမာဏကို ၂: ၁၊ ၅: ၁ သို့မဟုတ် ၃၀: ၁ စသည့်အချက်များဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်။ အကြောင်းအချက်ပိုမြင့်လေ၊ သင်ပိုမိုကုန်သွယ်မှုပြုလေ၊ သင်၏အမြတ်သို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုများလေလေဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်မင်းမှာမင်းရဲ့အကောင့်ထဲမှာ£ 300 ပဲရှိတယ်ဆိုပါစို့။ သငျသညျသဘာဝဓာတ်ငွေ့အပေါ်ရှည်လျားသောသွားချင်, သင်ကပိုင်ဆိုင်မှုအလွန်အမင်းတန်ဖိုးနည်းသောခံစားရတယ်အဖြစ်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်သည်သြဂုတ် ၁၀: ၁ ကိုအသုံးပြုသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အမှန်တကယ်£ 10 နှင့်ကုန်သွယ်နေသည်။
ဤဥပမာတွင်သင်၏ပေါင် ၃၀၀ သည်ယခုအခါအနားသတ်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်၏ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုးသည် ၁၀: ၁ (၁၀၀/၁၀ = ၁၀%) အရဆုတ်ယုတ်သွားပါကသင်၏ကုန်ပစ္စည်းပမာဏအားလုံးဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မည်။ ၎င်းကို“ ဖျက်စီးခြင်း” အဖြစ်လူသိများသည်။ အလားတူစွာသင်၏ငွေပေါင် ၃၀၀ နှင့်သင် ၂၅း၁ တွင်အရောင်းအဝယ်ပြုလျှင် အကယ်၍ ပိုင်ဆိုင်မှုသည်အချက် ၂၅း၁ (၁၀၀/၂၅ = ၄%) ဖြင့်ကျဆင်းသွားပါကသင့်အားငွေထုတ်ချေးလိမ့်မည်။
သင်သည်ဗြိတိန်တွင်အခြေစိုက်သည့်လက်လီရောင်းဝယ်သူဖြစ်ပါက (သို့မဟုတ်ထိုကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဥရောပပါ ၀ င်နိုင်ငံဖြစ်လျှင်) ဥရောပလုံခြုံရေးနှင့်စျေးကွက်အာဏာပိုင်အဖွဲ့ (ESMA) မှထည့်သွင်းထားသည့်သြဇာအကန့်အသတ်ဖြင့်သင့်အားကန့်သတ်ထားမည်
🥇 ၃၀: ၁ အဓိက Forex အားလုံးအတွက်သည်
🥇 ၃၀: ၁ အဓိကမဟုတ်သော Forex အတွဲများ၊ ရွှေနှင့်အဓိကညွှန်းကိန်းများအတွက်
🥇 ၃၀: ၁ ရွှေနှင့် Non- အဓိကရှယ်ယာညွှန်းကိန်းထက်အခြားကုန်စည်များအတွက်
🥇 ၃၀: ၁ တစ် ဦး ချင်းစီထိတ်သည်
🥇 ၃၀: ၁ cryptocurrencies သည်
စျေးကွက်အမှာစာ - သူတို့ကဘာတွေလဲ၊ သူတို့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ကြသလဲ။
သင်အွန်လိုင်းကုန်သွယ်ရန်သင်ယူလိုပါကစျေးကွက်အမှာစာများမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်သိရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အခြေခံအားဖြင့်၊ ဒီဟာကကုန်အမှတ်တံဆိပ်အချို့ကိုထိမှန်သွားတဲ့အခါသင့်ကိုအရောင်းအ ၀ ယ်တွေကိုအလိုအလျောက်ပိတ်ပေးမှာပါ။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ကုန်သွယ်မှုသည်သင်၏မျက်နှာသာရလျှင်ကုန်သွယ်မှုကိုအလိုအလျောက်ပိတ်ခြင်းဖြင့်အမြတ်အစွန်းကိုသင်အာမခံနိုင်သည်။ Simiaillly, ကုန်သွယ်ရေးသငျသညျဆန့်ကျင်သွားလျှင်, စျေးကွက်အမိန့်ကုန်သွယ်ရေးမှထွက်နိုင်ပြီး - သင်၏ဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချ။
✔️ Stop-Loss အမိန့်
နာမည်ကအကြံပြုထားသည့်အတိုင်း Stop-loss order သည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုဆုံးရှုံးမှုကိုလျော့ပါးစေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်က Bitcoin ကိုထင်ကြေးပေးနေသည်ဟုပြောပြီးကုန်သွယ်ရေးကိုပေါင် ၂,၀၀၀ တန်ဒေါ်လာ ၉၅၀၀ ဖြင့်ဖွင့်သည်။
ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, သင် Bitcoin ၏စျေးနှုန်းကိုတိုးမြှင့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ အမှုအခင်းသင့်ကိုဆန့်ကျင်သောအမှု၌, သင်သည်လည်းတစ် ဦး ရပ်တန့် - ဆုံးရှုံးမှုအမိန့်ချ။ သင်၏ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုး၏ ၅% ထက် ပို၍ မဆုံးရှုံးလိုသောကြောင့်သင်သည် Stop-loss order ကို $5တွင်နေရာချထားသည်။
ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် Bitcoin သည်ပုံမှန်အားဖြင့် ၂၀% ဆုံးရှုံးသွားသည်။ မူလကသင်သည်ပေါင် ၄၀၀ (သင်၏ကုန်သွယ်မှုပေါင် ၂၀၀၀ ၏ ၂၀%) ကိုဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။ သို့သော်သင့်အနေဖြင့်သင့်လျော်သော stop-loss ကိုဒေါ်လာ ၉,20 ဖြင့်တပ်ဆင်သောအခါသင်ဆုံးရှုံးမှုကို£ 400 (£ 20 ၏ 2,000%) သို့လျှော့ချလိုက်သည်။
Stop အာမခံ - Stop Loss အမိန့်
Stop-loss order သည်ထိရောက်မှုရှိပါကသင်၏ Order ကိုဖြည့်လိမ့်မည်ဟုမည်သည့်အာမခံချက်မျှမရှိပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင် Brexit ဆန္ဒခံယူပွဲရလဒ်တွင် GBP / USD သို့ stop-loss အမိန့်တစ်ခုချမိပါကအမှာမှာဝယ်သူတစ် ဦး ကိုရှာလိမ့်မည်မဟုတ်ချေ။ အကြောင်းမှာ GBP / USD သည်အလွန်တရာမတည်ငြိမ်သောကာလကိုဖြတ်သန်းသွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
၎င်းနှင့်သင်နှင့်ပွဲစားများအကြားသဘောတူညီမှုသည်ထိရောက်စွာရပ်တန့်သွားသောအမိန့်ကိုအမြဲတမ်းလိုက်ဖက်လိမ့်မည်။ သတိထားပါ၊ သင်ဟာရပ်ဆိုင်းမှုအမိန့်ကိုလုပ်ဆောင်ရန်ပိုမိုမြင့်မားသောအခကြေးငွေပေးဆောင်ရပါလိမ့်မည်။
သင်၏ကုန်သွယ်မှုသည်ကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုများမှအလွန်အမင်းဆုံးရှုံးခြင်းမှကာကွယ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသော်လည်းသင်အမြတ်ရသောအခါကုန်သွယ်မှုကိုအလိုအလျောက်ပိတ်ရန်အမိန့်တစ်ခုချမှတ်ရန်လိုအပ်သည်။ သို့မဟုတ်ပါကသင်သည်သင်၏ desktop စက်ပစ္စည်းတွင်မရှိလျှင်အကျိုးအမြတ်ကိုပိတ်ဆို့ရန်အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်သွားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ အမြတ်ယူရန်အမှာစာများသည်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောစျေးနှုန်းဖြင့်ကုန်သွယ်မှုကိုပိတ်လိမ့်မည်။
ဥပမာအားဖြင့်သင်သည်ငွေကိုဒေါ်လာ ၁၈.၂၄ နှင့်သင်ရောင်းလျှင် ၁၀% တိုးလာသောအခါအမြတ်အစွန်းကိုပိတ်ထားလိုလျှင်၊ ယူအက်စ်ဒေါ်လာ ၂၀.၀၆ ရှိသည်။ အကယ်၍ စျေးနှုန်းသည်ဒေါ်လာ ၂၀.၀၆ ထိထိလျှင်ကုန်သွယ်မှုသည်အမြတ် ၁၀% ဖြင့်အလိုအလျောက်ပိတ်လိမ့်မည်။
20-22 Wenlock လမ်း, လန်ဒန် N1 7GU မှတ်ပုံတင်ထားသောကုမ္ပဏီနံပါတ်: 11746374
၁ နှစ်အခမဲ့ VIP Forex Signal များရရှိရန်ဒေါ်လာ ၁၀၀ သွင်းပါ။
VIP သင်္ကေတများကိုရယူပါ၁ နှစ်အခမဲ့ VIP Forex Signal များရရှိရန်ဒေါ်လာ ၁၀၀ သွင်းပါ။ MT4 ကို Leverage ၁ မှ ၅၀၀ အထိဖြင့်ရောင်းဝယ်ပါ။